BUDHCAD BADEED SOMALI AH OO AFDUUBAY MARKAB KUWA DALXIISKA AH | Toggaherer's Weblog
Seychelles 03 April 2009 (THN)
Wararka kasoo baxaya Jasiirada Seychelles ayaa sheegaya in Markab laga leeyahay dalkaasi oo ah nooca Dalxiiska ay afduubeen burcad badeed Soomaali ah ayadoo la sheegay in markabkaasi kusii jeedo xeebaha Soomaaliya.
Markabkan oo lagu magacaabo Indian Ocean Explorer ayaa la sheegay inuu ku sugnaa nawaaxiga Jasiirada archipelago ee hoostagta Seychelles, halkaasi oo ay ku sugnaayeen dalxiisayaal kasoo jeeda dalka Ingiriiska.
Markabkan ayaa siday koos 7 dalxiisayaal reer UK ah, kuwaasi oo la sheegay inay ka badbaadeen afduubkan intii ay ku maqnaayeen Quusitaan xaga bada ah xiligaa ay Burcad badeedu la wareegtay Markabkii bada dusheeda ku sugayey.
Burcad badeedan ayaa la qafaalatay dhamaan shaqaalihii Marabkaasi dul saarnaa oo dhamaantood ah dad kasoo jeeda jasiirada Seychelles.
Dalxiisayaasha ka badbaaday afduubkan ayaa gaadhay jasiirada Assumption Island, saacado kahor intii aan la afduubin.
Mr.Kirk Green oo ah madaxa shirkada Aquatours oo ah shirkada Maareysa barnaamijka Dalxiiska oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska, ayaa sheegay in Ciidamada Ingiriiska ay usoo gudbiyeen warbixin la xadhiidhta afduubka markabkaasi oo iminka la sheegay inuu kusii jeedo magaalada Xarardheere oo ka tirsan gobalka Mudug ee Puntland.